[solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Window Problems » [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem]
1 [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 15th August 2010, 12:09 pm
ကျွန်တော့် စက်တစ််လုံး window တင်နေရင်နဲ့ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားတယ် ရွှေညီအစ်ကိုတို့ ကူညီကျပါအုံး ကျွန်တော် တစ်ခြမ်းကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင် ဘယ်လိုဖြုတ်ရင်ရမလဲဆိုတာ
နည်းလမ်းလေး မစ ကြပါအုံးဗျာ။
2 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 16th August 2010, 12:28 am
ညီလေး bosan ဘာဝင်းဒိုး တင်တယ် ဘယ်လို ဖြစ်တယ် ဆိုတာကိုသေချာလေးပြောပါ ကို နနက် ဖန် သေချာရေးပေးပါမယ် ခု ကိုမပြောခဲ့တာကလည်း ညီလေး ဖြစ်နေတာကို သေချာ မသိလို့ မဖြေလိုက်တော့ ဘူး C တခု ထဲ့မှာ ပဲ ၀င်းဒိုး ၂ ခု ဖြစ်နေတာလား
ဒါမှ မဟုတ် Partition2ခု ထဲ့မှာ တခုဆီတင်ထားတာလား
ကို အဲတာလေး သိရင် ဖြေပေးနိင်ပါတယ်
ဒါမှမဟုတ် -၀င်းဒိုး တင်နေရင်းနဲ့ နှစ်ခြမ်းကွဲသွားတယ် ဆိူတာကို နားလည်အောင် ပြောကြည့်လိုက်ပါ ကို
သေချာ ဖြေပေးပါ့မယ် ကို မသိတောင် နိိင်ငံခြားသားတွေ ကို မေးပေးပါ့မယ် ညီလေး အဆင်ပြေပါစေလို လည်း ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်
3 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 17th August 2010, 10:06 am
ကိုနေသစ်ဦး ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တင်ထားတာက window XP Professional version 2002 servicepack3ပါ
ဖြစ်ပုံကဒီလိုပါ ကျွန်တော် ၀င်းဒိုးတင်ပြီးသွားပီး winodow အခွေကို မထုတ်မိဘူးဗျာ software တွေအကုန်တင်ပီး
မှ စက်ကိုပြန်ပိတ်ပြီးထားခဲ့တာ အဲဒါ ဆိုင်မှာလာသုံးတဲ့တစ်ယောက် မသိဘူး window အခွေက စက်ထဲမှာရှိတော့
ဒီကောင်က လက်ကဆော့လိုက်တော့ နောက်တစ်ခေါက် Run မိသွားတယ်ဗျာ ကျွန်တော့်ကိုလှမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာက
နောက်ကျသွားပီ အဲဒီမှာ window က နှစ်ခြမ်းကွဲသွားတာဗျာ .. အဲဒီလိုဖြစ်သွားတာဗျာ တစ်ခြမ်းကို ပြန်ဖြုတ်ချင်တယ် Harddisk နှစ်ချမ်းခွဲလိုက်တာလို့ပြောမလားပဲဗျာ . . ကျွန်တော်က အွန်လိုင်းမှာအမြဲတမ်းလိုလိုရှိတက်ပါတယ်
4 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 19th August 2010, 1:40 pm
OS နှစ်ခြမ်းကွဲတယ်လို့တော့မကြားမိသေးပါဘူး။ တစ်မျိုးတော့ရှိတယ်။ windows.0000 လို့ပေါ်နေတာဆို၇င်တော့ နောက်မှ ပြောတော့မယ်။ နောက်တစ်မျိုးက OS တစ်ခုက HDD တစ်ပိုင်းမှာနေတယ် နောက်တစ်ခုက HDD နောက်တစ်ပိုင်းမှာနေတယ် လို့တော့ သိတာပဲ။ ဒါလည်း partition ခွဲထားမှပါ။
Partition တစ်ပိုင်းတည်းဆိုရင်တော့ နောက်ထပ်တင်လိုက်တဲ့ OS က ရှေ့က OS ကို ဖျက်ချသွားမှာပဲလေ။
ပြီးတော့ လှမ်းပြောတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်အပိုင်းကိုရောက်နေပြီလဲဆိုတာလည်း ပြောပြဦးမှပေ့ါ။ လောလောဆယ် OS တတ်သလား လည်း မသိသေးဘူးလေ။ OS တတ်ရင်တော့ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူး။
မေးထားတာကို သိပ်နားမလည်ဘူးဖြစ်နေတယ် ။
5 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 20th August 2010, 3:44 pm
bosan wrote: ကိုနေသစ်ဦး ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တင်ထားတာက window XP Professional version 2002 servicepack3ပါ
ညီလေးကို တခုတော့ ကိုပြောကြည့်မယ်နော်
အခု နောက်ထပ်တင်တဲ့ window ကို ပီး အောင် တင်လိုက်ပါညီ
တကယ် လို့ partition တပိုင်းတည်းမှာတင်မိလည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး
တပိုင်းတည်း ဆိုရင် ဥပမာ C မှာ တင်မိတယ် ဆိုရင် Old window ရှိနေပါလိမ့်မယ်
အရင် window ကို ဘယ်လို ဖြတ်မယ် ဆိုတာကိုပါ
ညီ နောက်တင်တဲ့ ၀င်းဒိူး ပီးသွားပီ ဆိုရင်တော့ C ထဲ့မှာ တင်တယ် ဆိုရင် C ကို ဖွင့်
Old window ကို Shift +Del နဲ့ ဖြတ်လိုက်ရင် ရပါပီ
တကယ် တမ်းတော့ Heain's Boot Cd နဲ့ ပြန်လုပ်သင့်တာပါ
အကို က အလွယ်ပြောလိုက်တာပါ ညီလေး ရေ
ညီလေး Heain's Boot Cd နဲ့ လုပ်ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့
ကို တင်ချင်ပေ့မယ် ဖိုရမ်မှာ ကို့ထက်ပိုကျွမ်း တဲ့ သူတွေ ရှိပါတယ်
သူတို့တွေ ပြောပြကြမှာပါ .......မပြောပြခဲ့ ရင်တော့ ခဏစောင့် ပေါ့ ..........ကို တင်ပေးပါ့မယ်
6 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 21st August 2010, 10:43 am
ဟုတ်ကဲ့ ပါ ကိုနေသစ်ဦး ကျေးဇူးပါပဲဗျာ နောက်ဝင်းဒိုးကိုအပီးထိမတင်ပဲ ဖြုတ်လို့ရတဲ့နည်းလေးရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါအုံး .. . မလိုချင်တဲ့ ၀င်းဒိုးအပိုင်းက အပီးအထိမတင်ရသေးပါဘူး
partation ခွဲတဲ့အပိုင်းကိုပဲရောက်သေးပါတယ် ကျွန်တော်စက်သုံးချင်ရင်တော့ အကုန်တင်ပီးသား ၀င်းဒိုးအပိုင်းကိုပဲ သုံးနေပါတယ်အခုတော့ . .တခြားနည်းလမ်းလေးကို စောင့်လိုက်ပါအုံးမယ် . . .
7 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 21st August 2010, 1:39 pm
partation မခွဲရသေးရင် ဘာမှ မဖြစ်ဘူးလေ။
8 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 21st August 2010, 3:34 pm
မရဘူးဗျ window တက်တဲ့အချိန်မှာ သူဘယ် window ကိုတက်မှာလဲလို့ ရွှေးတဲ့အပိုင်းကြီးမလိုချင်လို့ပါ
အဲဒီလို ဖြစ်နေလို့ပါ. . အဲဒီ window နှစ်ခုကို ရွှေးတဲ့အပိုင်းကိုဖြုတ်ချင်လို့ပါ ကိုအောင်ဆန်းဝင်း . .
9 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 21st August 2010, 3:48 pm
ဘိုစံရေ တစ်ခုတော့ ၀င်ဖောမယ် ကွာ
မင်းစက်ကို အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ ပြန်ကောင်းခြင်းရင်တော့ old windows ဆိုတဲ့ folder ကိုရှာပြီး ဖျက်ရင်ဖျက် မဖျက်ခြင်းရင် တော့ အလွယ်ကူးဆုံးနည်းကတော့ windows ကို အသစ်ပြန်တင်လိုက်ပါ
10 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 21st August 2010, 4:00 pm
ကို pooqee အွန်လိုင်းပေါ် တက်လာခဲ့ပါအုံးဗျာ . .
11 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 25th August 2010, 4:34 am
bosan wrote: ဟုတ်ကဲ့ ပါ ကိုနေသစ်ဦး ကျေးဇူးပါပဲဗျာ နောက်ဝင်းဒိုးကိုအပီးထိမတင်ပဲ ဖြုတ်လို့ရတဲ့နည်းလေးရှိရင်လည်းပြောပြပေးပါအုံး .. . မလိုချင်တဲ့ ၀င်းဒိုးအပိုင်းက အပီးအထိမတင်ရသေးပါဘူး
ညီလေး မေးတာကို ကို ဖြေပေးလိုက်ပါမယ် ညီလေး ရေ
window Boot တက်တဲ့ချိန်မှာ ညီလေး ၀င်းဒိုူတင်လက်စ မပီးသေးတဲ့ ၀င်းဒိုးလေးပါ ရှိနေတာကို ညီလေး ဆိုလို့တာလို့ ကိုထင်ပါတယ်
အဲနေရာမှာ မပေါ်စေချင်ရင် EASY BCD ကိုရမ်းပီးတော့ ဖြုတ်ပေးရပါတယ် ။။။။။။။။။
ဘယ်လိုဖြုတ်လည်းဆိုတာကိုတော့ ကို အချိန်ရရင် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်
လိုအပ်ရင် အကို့ အကောင့်ကိုအပ်လိုက်ပါ
တင်လက်စ မပီးသေးတဲ့ ၀င်းဒိုးကို ဖြုတ်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့
၀င်းဒိူး အပီးထိ တင်ထားတဲ့ Partition အပိုင်းထဲကိုသွားရပါမယ်.
အဲ့ထဲ့မှာ Old window ရှိနေမှာပါ ......(ဒါမှ မဟုတ် ) New Window ရှိနေမှာပါ
အဲတာကို ဖျက်ပေးလိုက်ရင် ရပါပီ ညီလေး ဘိုစမ်ရေ..........
12 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 25th August 2010, 11:27 am
ဘယ် OS ကိုရွေးမှာလဲလို့ မေးတာလား။ အဲဒါဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ OS နဲ့ ၀င်လိုက်ပါ။
ပြီးတော့ System properties > Advanced Tab > Startup and Recovery ထဲက Setting > system startup မှ Edit ထဲကို၀င်လိုက်ရင် notepad ဖိုင်ပွင့်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီအထဲကနေ ၀င်ပြီး မလိုအပ်တဲ့ OS ကို ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။ မှားဖျက်ရင်တော့ သူငယ်ချင်းရဲ့ OS လစ်သွားလိမ့်မယ်။ သတိထားဖျက်ပါ။ ပြီးရင် save လုပ်ပါ။ OKKKK
13 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem] on 17th September 2010, 2:27 pm
bosan wrote: မရဘူးဗျ window တက်တဲ့အချိန်မှာ သူဘယ် window ကိုတက်မှာလဲလို့ ရွှေးတဲ့အပိုင်းကြီးမလိုချင်လို့ပါ
အကို ဒီအောက်ကလင့်လေးကို သွားကြည့်လိုက်ပါ အကုန်အဆင်ပြေအောင်လို့ ကျတော် ညွန်းလိုက်တယ်နော်
14 Re: [solved]window နှစ်ခုထဲက တစ်ခုကိုပြန်ဖြုတ်ချင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဗျာ ကူညီကျပါအုံး [Problem]